एयर पिस्तौल Crosman C31: पावर, वर्णन र समीक्षा
धेरै वायवीय हतियार आत्म-रक्षा को लागि आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर, यो एकदम साधारण misconception छ। घुसपैठियों विरुद्ध सुरक्षा गर्न धेरै उपयुक्त छ ग्याँस डिब्बा या तपाईं एक धेरै खतरनाक इलाकामा बस्नुहुन्छ र आफ्नो जीवन, वास्तविक हातहतियारको लागि डराउँछन् भने। किन यति? यो प्रश्नको जवाफ तपाईं यस लेखमा पाउनुहुनेछ।
वायवीय किन आत्म-रक्षा को लागि उपयुक्त छ?
सायद मुख्य कारण किन हावा बन्दुक राम्रो नराम्रो शो नै आत्म-रक्षा मा - शक्ति। Munition वायवीय देखि जारी, पनि बाक्लो लुगा भित्र पस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईं (उदाहरण, हात, अनुहार र यति मा। डी लागि) शरीर को खुला क्षेत्रमा गोली भने, बुलेट बस शरीर बोसो मा फँस र आक्रमणकारीले चोटपटक र जल दुखाइ संग बच। एक आक्रमणकारीले लागूपदार्थ वा रक्सीको सक्षम थियो भने उहाँले घाइते महसुस गर्दैन। अर्थात् वायवीय आक्रमण रोक्न, तर रिस राम्रो हुन सक्छ। र यो मामला मा, तपाईं nesdobrovat।
धेरै तथाकथित मनोवैज्ञानिक प्रभाव भर - को स्ट्राइकर को हतियार देख्नुहुन्छ र ढिलो छ, यो हटाउनुहोस् राम्रो छ भनेर निर्णय गर्छ। तर, यो संख्या पनि काम गर्ने छैन। आखिर, हावा बन्दुक को लड देखि भेद गर्न एकदम सजिलो छ। त्यसैले, एक आक्रमणकारीले मेरो जीवनमा एक पटक आफ्नो हातमा हातहतियारको आयोजित भने, त्यो बुझ्न यो एक ब्लफ छ।
पनि वायवीय हतियार एक एकदम विशेष डिजाइन छ। गोली कं2(कार्बन डाइअक्साइड) को सिलिन्डर आवश्यक छ। तर के तपाईंलाई थाहा छ को रूप मा, संकुचित ग्याँस त्यहाँ सधैंभरि छ। सिलिन्डर दबाव बिस्तारै घट्छ, र त यो परिवर्तन हुनुपर्छ हरेक 2-3 दिन। पनि टिप्पण लायक चिसो को सिलेंडर मा दबाव कम छ। यो शट शक्ति धेरै कम हुनेछ भन्ने हो।
त्यसैले तपाईं आत्म-रक्षा को लागि भने, हावा बन्दुक गर्न के आवश्यक छ? यो प्रश्नको जवाफ तल पाउन सकिन्छ।
किन वायवीय लागि आवश्यकता?
पहिलो स्थानमा, वायवीय प्रशिक्षण लागि प्रयोग। कहिल्यै मेरो जीवन मा भएका एक हतियार पकड थिएन शुरुआती, यो हातहतियारको काम गर्न गाह्रो छ। एयर गन यस सन्दर्भमा धेरै राम्रो छ। पहिले, यो विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन यसरी उच्च विश्वसनीयता छ र। दोस्रो, वायवीय लागि बारूद को लागत एकदम कम। एक वायवीय बन्दूक देखि एक शट 10 पटक लड देखि सस्ता छ। साथै, कम बिजुली वायवीय सीमित मा प्रयोग गर्न सकिन्छ कारण, अन्तरिक्ष बन्द। एक विशेष बुलेट-जाल संग, तपाईं घर छोडेर बिना आफ्नो शूटिंग कौशल।
10 मीटर को दूरी मा लक्ष्य मा वायवीय देखि शूटिंग - यो एक ओलम्पिक खेल हो। के सबै भन्दा रोचक छ, अनुशासन उपलब्ध सन्दर्भमा। बन्दूक मरम्मत र मर्मतका लागि थप खर्च आवश्यक छैन, र गोलीले बरु सस्तो हो। नियम, 10 50 सेन्ट देखि एक खोल दायरा को मूल्य (संसारमा वायवीय लागि सबै भन्दा राम्रो गोलीले त्यहाँ लगभग 1 रुबल छन्)।
र, सायद, pneumatics को सबै भन्दा साधारण प्रयोग - मनोरंजन शूटिंग। बोतल र डिब्बे शूटिंग, तपाईं संचित तनाव हटाउन र सकारात्मक भावना धेरै प्राप्त गर्न सक्छन्। वायवीय संग जंगल मा एक पैदल बस नीरस हुन सक्दैन।
अब बजार फरक मोडेल संतृप्त छ। हावा pistols को नयाँ प्रकार प्रायः छन्, त्यसैले सही विकल्प गाह्रो छ। आफ्नो प्रतियोगिहरु गुणात्मक विशिष्ट पेस्तोल Crosman C31 को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध। यसको विशेषताहरु के के हुन्? को Crosman C31 हावा pistols अरूलाई भन्दा राम्रो हो? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ यस लेखमा पाउन सकिन्छ।
Crosman - यो वायवीय हतियार विनिर्माण जो अमेरिकी, मा सबै भन्दा ठूलो कम्पनीहरु मध्ये एक हो। उत्पादन गुणस्तर गर्दा सामान को किफायती मूल्य दायरामा छन्, युरोपेली उत्पादकहरु गर्न कमसल छैन। पनि हतियार को उपस्थिति प्रोत्साहन दिए। pneumatics को पनि सबैभन्दा मांग प्रेमीहरूको नक्कली सैन्य हतियार संग समानता द्वारा प्रहार गरिनेछ।
एयर पिस्तौल Crosman C31 - सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेल को एक, जो कम्पनीहरु आय को सिंहको शेयर ल्याउँछ। ग्राहकहरु बीचमा यस्तो लोकप्रियता को कारण के हो? पहिलो एयर पिस्तौल Crosman C31 एक लगभग रेकर्ड-तोडने शक्ति छ। प्रति सेकेन्ड लगभग 150 मीटर को प्रारम्भिक वेग। दोश्रो, बन्दूक दोकान मा एकदम फराकिलो छ। यो धेरै 18 को रूपमा मोती (इस्पात बनेको, 4.5 मिमि गेज) समावेश छन्। साथै, चल्ने ह्यान्डल को पछिल्लो भाग तपाईंलाई छिटो र सजिलै क्यासेट को प्रतिस्थापन पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। अर्को फाइदा ग्याँस गर्दा धेरै आर्थिक खर्च छ फायर छ। एक कारतूस 100 भन्दा बढी शट लागि पछिल्लो हुनेछ।
यो मोडेल मा ठाँउहरु विशेष पट्टा र अगाडि दृष्टि प्रस्तुत। Crosman C31 पनि हल्का पुस्तिका सूत्रहरू विशेषताहरु। यो तपाईं पनि गरिब दृश्यात्मक को मामला मा गोली गर्न अनुमति दिन्छ। इच्छित भने, एक हावा बन्दूक एक 22-मिलिमिटर पट्टी riflescope स्थापना गरेर स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि टर्च वा राख्न सक्छ लेजर designator।
Crosman C31 मूल्य
साथै, हामी पनि हतियार लागत कुरा गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीं निर्माताहरु यो स्पष्ट छैन यो लायक छ पनि भने, आफ्नो हतियार लागि मूल्यहरू फुल्नु। खुसीको कुरा, कम्पनी Crosman यो रोग ग्रस्त छैन। Crosman C31 को मूल्य सानो र एकदम सुलभ छ। अर्डर एक बन्दूक प्राप्त गर्न बारेमा 4,000 rubles (1400 युक्रेनी रिव्निया) भुक्तानी गर्न हुनेछ। तुलना लागि, अन्य लोकप्रिय मोडेल विचार गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, कम्पनी Umarex लायक 7000 rubles (बारेमा 2500 रिव्निया) बाट Umarex Walther P38। Beretta एम नै कम्पनी बाट 92 एफएस लागि चिरपरिचित एक 11 भन्दा बढी 000 rubles (बारेमा 4000 रिव्निया) भुक्तानी गर्न हुनेछ।
Crosman C31 लाभ को एउटा ठूलो छ। यी फायर समयमा Ergonomics, एक अपेक्षाकृत उच्च शक्ति, बन्दूक, एक ठूलो स्टोर को कम वजन र एकदम आर्थिक ग्याँस खपत समावेश गर्नुहोस्। साथै, यो मूल्य Crosman C31 धेरै नै वर्ग मा वायवीय भन्दा सस्ता छ। एक Crosman C31 - भनेर हामी गुणस्तर-मूल्य अनुपात सबै भन्दा राम्रो एक को छ कि निर्धक्क भन्न सक्नुहुन्छ, छ। यो बन्दूक मा समीक्षा थप सकारात्मक हो। यो मोडेल को सायद मात्र drawback - सटीक। Crosman C31 देखि हिट को शुद्धता, दुर्भाग्यवश, टाढा आदर्श हो। त्यसैले, यो खेल शूटिंग मा प्रतिस्पर्धा गर्न यो मोडेल प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन। तर हावा पेस्तोल Crosman C31 मनोरंजन सुटिङ र प्रशिक्षण newcomers लागि आदर्श अनुरूप हुनेछ।
फिटनेस Bracelet सैमसंग गियर फिट 2: सिंहावलोकन र समीक्षा
Podstvol'nyy ग्रेनेड लन्चर जीपी-25
धातु "टेरा-एच": वर्णन, प्रयोगकर्ता मूल्यांकन र समीक्षा
पुराना बिजुली बाइक: रेट्रो र आधुनिक
कसरी पौडिरहेका लागि पंख चयन गर्न?
म आत्माको शौचालय पानी फरक छन् के आश्चर्य?
Astronotus mottled। प्रजाति Astronotus
पोशाक - अगाडि छोटो, लामो फिर्ता - कुनै पनि महिला अनुरूप हुनेछ
Tefal उपलब्धिहरु। फ्राइङ प्यान उच्च प्रविधिहरूको उत्पादन हो
दिन पेंशनरहरुलाई: घटना इतिहास। को उद्देश्य र छुट्टी को कार्यहरू
एन्डोस्कोपी: यो के हो? पेट को माथिल्लो एन्डोस्कोपी: प्रक्रिया को तयारी र वर्णन
कसरी एउटा फोटो सम्पादक को मद्दत बिना सुन्दर फोटोहरू बनाउने?
बोसो, प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेट को दैनिक आदर्श (गणना तालिका)
एनालग "Tobrex" सस्ता र थप कुशल
मा स्कूल विषयहरू सूची: ज्ञान - शिक्षा जग
"पहिलो शिक्षक" Aitmatov: सारांश र उत्पादन को विश्लेषण